विश्वकपमा क्रोएसियाकाे कमाल ! – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकपमा क्रोएसियाकाे कमाल !
जारी फुटबल विश्वकपमा एकएक गरी परम्परागत दाबेदारहरूलाई पन्छाउँदै आफूलाई फाइनलसम्म ल्याइपुऱ्याउन सफल टोली हो क्रोएसिया।
विश्वकप सुरु हुनुभन्दा अगाडि ब्राजिल, अर्जेन्टिना, जर्मनी र पोर्चुगल जस्ता टीमहरूको खुबी चर्चा थियो। त्यहाँका स्टार खेलाडीहरूलाई फुटबल नायकको रूपमा चित्रित गर्दै मिडियाहरूमा समाचार आउने गर्दथे। तर जसो जसो विश्वकप अगाडि बढ्दै गयो परम्परागत नायकहरू ओझेलमा परे र रंगमंचमा नयाँ नायकहरूको उदय भयो।
नायकहरूको यस फेरबदलले एउटा कुरा भने प्रष्ट पारिदियो त्यो के भने फुटबलमा कुनै विशेष खेलाडीको प्रतिभा जस्तोसुकै भएपनि ऊ एक्लैले आफ्नो टीमलाई सधैं संकटबाट पार लाउँ सक्दैन। यसका लागि उनीहरू ‘टीम’ भएर खेल्नु अनिवार्य हुन्छ र यस सूत्रको भरपूर प्रयोग गरेर नै क्रोएसिया यस सफलता सम्म पुगेको हो।
दोस्रो सेमिफाइनलमा इङ्ल्याण्डलाई धुलो चटाउँदै क्रोएसिया यस स्थानमा पुगेको हो।
फिफा विश्वकापमा क्रोएसियाली उपस्थिति
यदि उपस्थितिको गणना गर्ने हो भने क्रोएसिया यो लगायत पाँचौं पटक विश्वकपमा भाग लिँदैछ। विश्वकपको एक्काइसौँ शृंखला जारी रहेका बेला यो उपस्थिति उल्लेख्य नलाग्न सक्छ तर सेतो र रातो चेक भएको जर्सीमा सन् १९९८ मा फ्रान्समा भएको विश्वकप नै उसको पहिलो विश्वकप अनुभव थियो।
त्यस यता २००२,२००६ र २०१४ विश्वकपमा समेत ऊ सम्मिलित भइसकेको छ। यदि तथ्यांकहरू हेर्ने हो भने यो उसको सबैभन्दा राम्रो विश्वकप प्रदर्शन पनि हो। यसअघि ऊ १९९८ मा पहिलै विश्वकपमा सेमीफाइनलसम्म पुग्न सफल भएको थियो।
१९९८ अघि १९३० देखि १९९० सम्मका विश्वकप प्रतियोगितामा ऊ युगोस्लोभाकियाका तर्फबाट विश्वकपमा सम्मिलित हुने गर्दथ्यो। १९९४ र २०१० मा भने ऊ विश्वकपका लागि छनौट हुन सकेन।
मात्र ४० लाखको जनसंख्या भएको सानो देश क्रोएसिया कसरी यति ठुलो उपलब्धिको संघारनेर पुग्न सफल भयो भन्ने बारे धेरै तर्क र अनुमानहरू लगाइने गरेका छन्।
प्रसिद्ध ब्रिटिश अखबार द सनका अनुसार फुटबल विशेषज्ञहरू यसमा पूर्व युगोस्लोभाकियाको एकेडेमीको ठुलो योगदान रहेको छ। क्रोएसियाले सन् १९८७ मा चिलीमा भएको अण्डर-२० च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेर तहल्का मचैसकेको थियो तर स्वतन्त्र देशको रूपमा विश्वकप खेल्न उसले अझै सात वर्ष कुर्नु पऱ्यो।
कुनै समय चिली, ब्राजिल र पश्चिम जर्मनीलाई हराउने युगोस्लोभाकियालाई विश्वकै उत्कृष्ट टीम मानिन थालेको थियो तर उपाधि जित्ने उसको सपना भने कहिल्यै पुरा हुन सकेन।
सन् १९९१ मा बाल्कन युद्ध सुरु भएपछि युगोस्लोभाकियाको यो सपना नराम्ररी तुहियो किन भने अब ऊ छिन्न-भिन्न भएको इतिहास लेखिनेवाला थियो।
यस्तो छ क्रोएसियाको इतिहास
क्रोएसियाली इतिहास आक्रमण, कब्जा र प्रत्याक्रमणहरूको शृंखला हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। छैठौं शताब्दीमा क्रोटहरू मध्य र दक्षिण पूर्वी युरोपमा एड्रियाटिक समुद्र किनारमा अवस्थित यस भूमिमा बस्न आए यता यस देशमा विभिन्न छिमेकी राष्ट्रहरूले पटक पटक कब्जा गरिरहे।
उनाइसौं शताब्दीको सुरुमा यहाँ फ्रान्सेली साम्राज्यको कब्जा भयो। १९१८ मा क्रोएसियाले आफूलाई स्वतन्त्र भएको घोषणा गऱ्यो र यहाँको संसदले ‘स्टेट अफ स्लोभेनस, क्रोएट्स एंड सर्ब’सित जोडिने फैसला गऱ्यो। यस देशको नाम १९२९ मा ‘युगोस्लाभ अधिराज्य’ भयो।
नाजी आक्रमण र समाजवादी युगोस्लोभाकियाको स्थापना
दोस्रो विश्व युद्धमा नाजी जर्मनीले १९४१ मा युगोस्लोभाकियामा आक्रमण गर्दा अधिकांश क्रोएसियाली भूभाग जर्मनीको कब्जामा हुन पुग्यो।
विश्वयुद्धपछि यो ‘फेडरल स्टेट अफ क्रोएसिया’ बन्यो। र पछि समाजवादी संघीय गणतन्त्र युगोस्लोभाकियाको संस्थापक सदस्य तथा संघीय घटक बन्यो।
९० को दशकको अन्तिम वर्षहरूमा सोभियत संघसँगै समाजवादी युगोस्लोभाकियाको विघटन सुरु भयो। यसको प्रत्यक्ष असर क्रोएसिया माथि पर्न गयो।
स्लोभेनियामा युद्धपछि यसको असर क्रोसियामा समेत पर्न गयो। यस क्षेत्रमा तनाव बढिरहेकै पृष्ठभूमिमा २५ जुन १९९१ मा क्रोएसियाले आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गऱ्यो। र त्यसै वर्ष ८ अक्टोबरदेखि ऊ अलग देशको रूप्मा विश्व मानचित्रमा उदायो।
तर ठीक यसै बेला युगोस्लाभ पब्लिक आर्मी र सर्ब पारा मिलिट्री बलले क्रोएसियामथि आक्रमण गरे। १९९१ को अन्त्यसम्म क्रोएसियाले आफ्नो दुई तिहाई भूभाग गुमिसकेको थियो। यस अवधिमा लाखौं क्रोएसियाली मूलका मानिस मारिए र घरबार विहीन भए।
जनवरी १९९२ मा क्रोएसियालाई युरोपेली आर्थिक समुदायको सदस्यता प्राप्त भयो र त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघले उसलाई स्वतन्त्र देशको रूपमा मान्यता दियो। अगस्ट १९९५ मा युद्ध समाप्त हुँदा क्रोएसियाले आफ्नो समग्र भूभाग फेरि आफ्नो कब्जामा लिइसकेको थियो।
फुटबलले दियो नयाँ आशा
यस्तो वीभत्स युद्ध समाप्त भएको मात्र तीन वर्षपछि क्रोएसियाली फुटबल विश्वकपका लागि छनौट मात्र भएन पहिलोपल्ट नै उसले सेमीफाइनलसम्मको यात्रा तय गऱ्यो। यो उसलाई ठुलो राहत मात्र थिएन विश्व मन्चमा आफ्नो पहिचान बनाउने मौका समेत साबित भयो।
आज क्रोएसियाले आफूलाई विश्वमा चिनाउने कोसिस गर्दैछ। ऊ विश्वका २० सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये पर्दछ र उसको वैश्विक भूमिकामा समेत वृद्धि भएको छ ।
डिनामो जाग्रेब एकेडेमी क्रोएसियाको राजधानी जाग्रेबमा अवस्थित एउटा प्रसिद्ध फुटबल क्लब हो। यसले क्रोएसियाली फुटबललाई लुका मोदरिक, डेजान लोभरन, सिमे भिरास्लाजको, मारियो मांदजुचिक र मातेओ कोभासिच जस्ता खेलाडी दिएको छ ।
यस देशले फुटबललाई आफ्ना विगतका घाउमा मलम लगाउने माध्यमका रूपमा हेर्ने गर्दछ। यस पटक पहिलोपल्ट ऊ उपाधिको यति नजिक पुगेको छ र उसको बाटो छेक्न एक पटक विश्वकप जितिसकेको र यस विश्वकपमा समेत राम्रो लय समातिरहेको फ्रान्स खडा छ। हेरौं आइतबार हुने फाइनलमा कसले मर्छ बाजी?
ट्याग्स: CROATIA, Fifa world cup 2018, Final